Lumay waxyaabaha waano muhiim ah oo ku saabsan iPhone? Ha aad ka walwalsan tahay. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa samatabbixiyaha weyn caawiyo dib u soo ceshano xusuusinta tirtiray iyo macluumaad kale oo ka dhow oo dhan lagu daydo iPhone siyaabo kala duwan. Waxaad si fudud u heli dib xusuusinta lumin karaa in 5 minites.
Wondershare IPhone Xusuusin Recovery
Ceshano xusuusinta tirtiray on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Si toos ah soo kabsado xusuusinta ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Waraaqda gurmad Lugood dib u soo ceshano xusuusinta hore iPhone
Ma xasuusin oo kaliya, waxa kale oo ay soo kabanayso fariimaha, xiriirada, sawiro, videos, qoraalo, iwm
Kabsado xogta waayay tirtirka, khasaaraha qalab, JAILBREAK, hagaajinta macruufka, iwm
Xulo ku eegaan ceshan xog kasta oo aad rabto in aad
Qaybta 1aad: Si toos ah Ladnaansho tirtiray Xusuusin on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Qeybta 2: ka ee kaabta Lugood Ladnaansho iPhone Xusuusin
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer ka iyo waxa laga baarayo
Marka aad ordi barnaamijka, sii joogo hab kabashada ee ka soo kabsado Device macruufka ah. Markaasay aad u hesho iPhone xiran computer la cable USB ah. Marka aad iPhone u habaysan, aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka ee sida soo socota.
Waxaad si fudud u riixi kartaa batoonka Start Scan cagaaran ee suuqa kala ugu weyn ee ay u bilaabaan aad ka baareyso iPhone u xusuusinta tirtiray aad iPhone.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xusuusinta iPhone
Skaanka aad qaadan doonta muddo yar. Marka la joojiyo, oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga helay aad iPhone in natiijada scan. Waxaa loo soo bandhigay in qaybaha muujiyey dhinaca bidix ee suuqa. Dooro item ee Xusuusin , oo aad ku eegaan karo oo dhan content waano faahfaahsan. Sax waxa aad rabto iyo guji Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Taasi waa si fudud oo dadka oo dhan oo keliya qaban karaa. Download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo keligaa.
Tallaabada 1. Dooro gurmad Lugood ee file oo Macdan
Haddii aad synced aad iPhone la Lugood hor, wuxuu galabsaday xusuusinta iPhone tirtiray via gurmad Lugood sidoo kale noqon kartaa doorasho fiican. Ka dib markii socda barnaamijka, bedesho hab kabashada ee ka soo kabsado Lugood ee kaabta File. Markaas prgoram si toos ah ka heli doontaa dhammaan gurmad files Lugood kaydiyaa on your computer iyo u muujiyaan in liiska.
Dooro mid ka saxda ah ee iPhone. Haddii ay jiraan wax ka badan hal, dooro mid ka mid ah la soo dhaafay. Markaas riix Start Scan button Macdan content waxaa ka mid ah.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha iyo dib u soo ceshano xusuusinta tirtiray aad iPhone
Waxa aad ku kici doona daqiiqado yar lagu soo saaro faylka gurmad. Marka ay ka badan, waxaad ku eegaan karo oo calaamadee dhammaan xogta ku faylka gurmad si faahfaahsan. Barnaamijku wuxuu aad oo dhan oo iyaga ka soo bandhigaysaa in qaybood, sida kitaabkii duudduubnaa camera, il sawir, fariimaha, xiriirada, iwm xusuusinta, aad si toos ah u riixi kartaa shayga oo ku eegaan waxa ku jira mid ka mid ah. Markaas calaamadee wax kasta oo aad rabto oo guji badhanka uu soo kabsan si aad u hesho dib on your computer.
Download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo keligaa.
Baadh More for Best Apps waano Bilaashka ah ee isticmaala iPhone
Ma doonayo in ay sii wadaan la isticmaalayo app Xusuusin ee macruufka 7? Waxaa jira ugu fiican app kale oo xusuusin lacag la'aan ah lagu talinayaa in aad u.
, Hadalka aqoonsi, Time & Location Xusuusin, Moment Any.DO, galalka, Notes, Hawlaha xusuuta, aragtida Calendar, taageero tilmaam & dheeraad ah u hagaagsan daruur aan xuduud lahayn! Any.DO ku siinayaa fursado laakiin ma dalban adayga. Haddii aadan u baahan tahay a app xusuusinta ah ee iPad iyo laakiin rabaa wax si fiican u shaqaynayaan iyada oo internetka, Any.DO waa habka ay u tagaan.
Free - waxaa hadda Download
Wunderlist leeyahay dhamaan muuqaalada app ah hawsha dhaqanka, laakiin ku hayaa aruuray ka mid ah jidka aad. Wunderlist waa habka ugu fudud ee loo maareeyo iyo wadaagto aad maalin walba si ay u-sameeyo liiska. Haddii aadan u baahan tahay xusuusin ku salaysan goobta laakiin waan jeclaan lahaa a gacanta ku yar ka badan kala sooca iyo wadaaga hawlaha, u tag la Wunderlist.
Listastic waa sida midabo sida app macruufka 7 Xusuusin ah, laakiin ku darayaa baaqyada badan oo dheeraad ah u navigation deg deg ah oo ay gacanta. Haddii aad jeclaan app dhisay-in Xusuusin laakiin aad dooneysid uun in ka badan, Listastic ayaa kugu daboolay.
Item kasta oo loo qabto ayaa kaliya seddex doorasho: waxa ay sameeyaan maanta, waxaa samayn berri, ama waxaa la samayn. Haddii aad u baahan tahay wax gabi ahaanba fudud in lagu bilaabo, waxa aanu ka fiican tahay bilow u hesho.
> Resource > Ladnaansho iPhone Data > Sida loo soo ceshano tirtiray Xusuusin on iPhone